पुल-बाहिर ओछ्यानमा बच्चाहरु को लागि - मुख्य कार्य जो को कोठा वा घर पूर्ण ठाउँ प्रयोग गर्न छ बाहेकलाई कार्यात्मक फर्नीचर,।
फर्नीचर तह को विचार देखा, वा जीवन को संयोजन। हाम्रो अपार्टमेन्ट को थोक - एक कम्प्याक्ट ठाउँ। साथै, ठाउँ बचत सुसज्जित अपार्टमेन्ट को होस्टहरूको अधिक भार को खराब बानी हो। हामी धेरै घरहरू दराज, अल्मारी को एक विशाल राशि, अलमारियाँ सबै प्रकारका हुन छ भन्ने तथ्यलाई गर्न accustomed छन्। कुरा हुनुपर्छ कहीं राख्न भन्ने तथ्यलाई बावजुद फर्निचरहरू सानो ठाउँ लिन्छ, र ज्यादातर यसलाई inefficiently प्रयोग गरिन्छ।
बच्चाहरु को लागि पुल-बाहिर ओछ्यानमा यस पृष्ठभूमिमा धेरै उपयुक्त देखिन्छ मा। यसलाई आफ्नो लम्बाइ मानक मोडेल भन्दा कम छ, तल्लो रोलर्स मा स्थित छ। यस कारण, यो मोडेल पूर्ण सामान्य ओछ्यानमा अन्तर्गत फिट। रात खर्च गर्न, तपाईं बस धक्का र बिहान देखि साँझ धक्का गर्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ ओछ्यानमा दिन्छ। बच्चाहरु को लागि पुल-बाहिर ओछ्यानमा बच्चाहरु को लागि उत्तम छ। निस्सन्देह, तपाईंले एक बंक र एक मोडेल राख्न सक्छ, तर हरेक अभिभावक बच्चा दोस्रो तल्ला मा सुत्न हुनेछ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्नुहुन्छ। यस मामला मा आदर्श समाधान एक बच्चाको ओछ्यानमा "युगल" त्याग दिन योग्य हुनेछ। यसलाई पूर्ण बच्चाहरु खेल लिन टाढा छैन ठाउँ अर्को ओछ्यानमा समस्या solves र अझै पनि।
यो एक खींच-बाहिर सोफा को रूप मा सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो नै ठाउँ-बचत अर्को वैचारिक समाधान छ। यो बसिरहेका र सिट reclining संयोजन मा आधारित छ। यो मोडेल मुख्य रूप जीवित कोठा मा सेट गरिएको छ। को सोफा दिन एक ठूलो कुर्सी छ, र राती एक आरामदायक ओछ्यानमा बन्नेछ। यसको परिवर्तन को विशेष संयन्त्र मार्फत गरिन्छ। परिणाम 2-3 मान्छे को लागि एक आरामदायक ओछ्यानमा छ। त्यहाँ छोराछोरीको लागि छुट्टै कोठा आवंटित गर्न कुनै संभावना हुँदा यस्तो भिन्न, अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय छन्। यस मामला मा, रात मा कोठा एक बेडरूम मा, बाँकी को आमाबाबुले दोस्रो कोठा मा उत्तेजित गर्दछ।
बच्चाहरु को लागि प्रत्येक खींच-बाहिर ओछ्यानमा वा काठ आधार एक ठोस धातु मा बनेको छ। यसको निर्माण मा आधुनिक सामाग्री र प्रविधिहरू प्रयोग गरिन्छ। यो यस मामला ठूलो छुट्टी प्रदान गर्नेछ मा, एक लामो समय को लागि पछिल्लो हुनेछ सुनिश्चित गर्दछ।
फर्नीचर को प्रकार को बिना तपाईंले केही विवरण तिर्न ध्यान खरिद गर्दा आवश्यक छ। बेबी ओछ्यानमा दराज (तिनीहरूलाई केही पृष्ठमा प्रस्तुत छ फोटो) यसको विस्तार (वा विस्तारित) स्थितिमा फर्नीचर अन्य वस्तुहरू हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। साथै, तिनीहरूलाई वरिपरि सजिलो maneuvering लागि न्यूनतम ठाउँ हुनुपर्छ। यो सबै यस्ता मोडेल कोठा मा unallocated ठाउँ को उपलब्धता आधारित खरिद छन् भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। अन्यथा तपाईं बस छैन विस्तार गरिनेछ।
अर्को प्रश्न परिवर्तन को लागि विधिहरू गर्न भन्छिन्। आफ्नो काम को सिद्धान्त राम्ररी फिर्ता भण्डारमा जाँच गर्नुहोस्। यसलाई आउँदा छोराछोरीलाई लागि फर्नीचर, सबै संयन्त्र बच्चालाई स्वतन्त्र विस्तार गर्ने हुन सकेन र यो गुना तरिकामा काम गर्नुपर्छ।
हात काठ बनेको समतल। आफ्नो घर सान्त्वना सिर्जना
सबै भन्दा राम्रो गद्दे को सर्वश्रेष्ठ "Toris"
"क्लिक गर्नुहोस्-klyak" (संयन्त्र): लाभ र बेफाइदा को विवरण
खिलौने लागि प्लास्टिक दराज - आवश्यक र महत्त्वपूर्ण
फर्नीचर काठ को गरे। के ट्री छनौट?
को राशि को राम्रो साइन के हो? सबै गणना मा राशि को सबै भन्दा राम्रो साइन
तपाईंको आफ्नै हातले सना मा वेंटिलेशन। म सना मा वेंटिलेशन चाहिन्छ?
के मा महिना विवाह गर्न राम्रो छ? सबै भन्दा राम्रो विकल्प चयन
अनुहार लागि क्रीम पाउडर: चयन र लागू गर्न कसरी
रेनल्ट ग्रैंड पर्व - विशाल, उच्च गति, प्रतिष्ठित
अस्पताल "Leningrad", Nalchik फोटो, समीक्षा
समीक्षा के हो र आफ्नो तयारी लागि नियम के हुन्?
Unmetered बिजुली खपत: अवधारणा, ठीक। कला। 7.19 प्रशासकीय कोड को। अनधिकृत जडान र बिजुली, गर्मी, ग्याँस वा तेल प्रयोग
प्यानकेकहरू पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री लागि एक सरल नुस्खा
चाउचाउ को Casserole: yum! कीमा बनाएको मासु संग पाकेका पास्ता। चाउचाउ को मिठो casserole